Wakiilka Malcom oo sharaxaad ka bixiyay xaqiiqda ah inuu ku biirayo Inter Milan – Gool FM
Wakiilka Malcom oo sharaxaad ka bixiyay xaqiiqda ah inuu ku biirayo Inter Milan
(Yurub) 28 Maarso 2019. Wakiilka da’ayarka reer Brazil iyo kooxda Barcelona ee Malcom ayaa beeniyay wararka xanta ah ee sheegaya in uu ku biiri doono Inter Milan, kadib marka uu furmo suuqa xagaaga ee soo aadan.
Barcelona ayaa Malcom kula soo saxiixatay xagaagii hore aduun dhan 40 milyan euro, laakiin tababare Ernesto Valverde ma uusan ku tiirsanaanin adeegiisa tan iyo markii uu yimid garoonka Cump Nou, wuxuuna daris la noqday kursiga keydka.
Wargeyska “Sport” ee dalka Spain ayaa sheegay xiliyadii lasoo dhaafay in Inter Milan ay wada hadalo kula jirto da’ayarka reer Brazil iyo kooxda Barcelona ee Malcom, balse claims oo ah wakiilkiisa ayaa beeniyay arintan.
“Xiriir wanaagsan ayaan la leenahay agaasimaha ciyaaraha ee kooxda Inter Milan, balse wax xiriir ah la sameynin ilaa iyo haatan”.
Waxaa xusid mudan in Malcom uu yahay ciyaaryahanka kaliya kooxda Barcelona ee xili ciyaareedkan ciyaaray daqiiqadaha ugu yar kulamada horyaalka La Liga, wuxuuna ciyaaray kaliya 129 daqiiqo, mana uusan dhalinin wax gool ah, sidoo kale ma sameynin wax caawin ah horyaalka Spain.
Lucas Hernandez oo hadalo cajiib ah ka dhawaajiyay, kadib heshiiskii uu u saxiixay kooxda Bayern Munich
Halyeeyga reer Holand ee van der Sar oo ku hanjabay in Ajax ay garaaci karto kooxda Juventus